Building a Lottery System with Microsoft Visual Basic .NET – Somali Virtual Academy
Koorsadaan waxaad ku baran doontaa sida loo dhiso barnaamij Bakhtiyaa-nasiib ah min bilow ilaa dhamaad, barnaamijkaasoo loogu talagalay in lagu soo bandhigo goob ay xaflad ka dhaceyso.
Ka qeyb galayaasha xafladda mid kastoo ka mid ah waxaa la siin doonaa nambar gaar ah, kadib system-ka wuxuu sameyn doonaa inuu nambaradaas si random (lama filaan) ah uu uga doorto midkuu doono, kadibna qofka nambarkaas wata ayaa soo istaagi doona kadibna qofkaas liis ka kooban 12 nambar ayuu midkuu doono ka dooran doonaa, kadibna nambarkaas hadiyada ku xusan ayaa la guddoonsiin doonaa.
Muxuu System-ku ku dhisan yahay?
System-ka waxaa lagu dhisi doonaa luqada VB-da oo ah luqad ay aad u fududahay isticmaalideeda, waxaana isticmaali doonnaa IDE-ga Microsoft Visual Studio 2015, anagoo dhisi doonna Windows Forms Application (Desktop Application) ku dhisan VB.NET.
Koorsadaan waxaa loogu talagalay ardayda jecel software development-ga, iyo guud ahaanba arday jecel programming-ka.
Intey socoto koorsadaan oo dhan waxaan ku dhisan doonnaa project lottery ah min bilow ilaa dhamaad.
Waxaad ku baran doontaa sida cod loogu soo daro project-ga loona daaro codka iyadoo code la isticmaalayo.
Waxaad ku baran doontaa sida Progressbar & Timer controls-ka loo isticmaalo.
Waxaad ku baran doontaa sida loo qoro code si random ah usoo qabanaya nambarada.
Waxaad ku baran doontaa sida project-ga looga dhigo mid installable ah oo aad kambiyuutarkaad doonto ku duuban karto.
Iyo intaas in kasii badan.
Waxaa lagaaga baahan yahay:
Inaad wax uun ka taqaano Adobe Photoshop.
Inaad fahmi karto ama horey usoo aragto luqada VB-da.
Iney kaa go’an tahay inaad dhameysato koorsadan.
Chapter 0: Welcome
0.1 Welcome FREE 00:02:00
0.2 Viewing Our Final Project That We Are Going To Build FREE 00:04:00
0.3 Who Should Take This Course 00:05:00
0.4 Downloading Course Exercise Files 00:00:00
Chapter 1: Analysing the Project
1.1 Understanding Lottery Programs 00:06:00
1.2 Analysing the System 00:07:00
1.3 Wireframing the System 00:10:00
Chapter 2: Designing Our Project
2.1 Searching System Resource Images 00:07:00
2.2 Designing Buttons 00:06:00
2.3 Designing Random Number Generation Form 00:25:00
2.4 Designing our Main Form 00:05:00
2.5 Designing Gifts Form 00:05:00
Chapter 3: Setting up Project in Visual Studio
3.1 Creating New Project in Visual Studio 00:11:00
3.2 Adding Required Windows Forms 00:11:00
3.3 Adding Designed Background Images to Forms 00:05:00
3.4 Adding Designed Buttons 00:14:00
Chapter 4: Making the System Functional
4.1 Building Random Number Generation Form 00:17:00
4.2 Building our Main Forms 00:17:00
4.3 Making Already Chosen Numbers Inavailable 00:10:00
4.4 Adding Loughing Sound to the Entertainment Gift 00:15:00
4.5 Adding Club Sound to the Gift Form 00:11:00
4.6 Making our Forms Closed when we click Close Button 00:05:00
4.7 Adding ProgressBar, Label and Timer Controls to the Form 00:12:00
4.8 Fixing Timer issues 00:11:00
4.9 Solving our Previous Error 00:03:00
4.10 Making our Code Clean and Reusable 00:11:00
Chapter 5: Making Our Software Installable
5.1 Installing Smart Install Maker 00:08:00
5.2 Making the Software Installable 00:10:00
6.1 What is Next 00:01:00